ယုန်လေးနဲ့မြင့်မြတ်ရဲ့ပုံစံကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောနေကြတဲ့သူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားဒဲ့ပြောလိုက်ပြီ – Cele Top Stars
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေလူလူချင်းး တူတယ်။ မတူတာ စိတ်ဓာတ်။ သတင်းတော်တော်များများးမှာ ဇာတ်လိုက် မြင့်မြတ် ကို B.L.A.M.E နေကြတယ်။ နောက်ပီးးး လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်မှာလဲ Speak out မလုပ်လို့ဆို ပြီးးး ပြောသံတွေကြားးနေရတယ်။ နားးးမခံသာလို့. ရေးရခြင်းးဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဗျ.yonelay နဲ့ပေါင်းးတိုင်းး သူ့လိုမထင်လိုက်နဲ့ဗျ့။ ဇာတ်လိုက်က ဇာတ်လိုက် လူဆိုးက လူဆိုးးး။ပေါ်ပင်လိုက် တစက်မှအချိုးးမပြေတဲ့ yonelay နဲ့နှိုင်းးရင် နှိုင်းးတဲ့သူရိုင်းးမှာပဲ။
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရလေူလူခငျြးး တူတယျ။ မတူတာ စိတျဓာတျ။ သတငျးတျောတျောမြားမြားးမှာ ဇာတျလိုကျ မွငျ့မွတျ ကို B.L.A.M.E နကွေတယျ။ နောကျပီးးး လူမှု့ကှနျယကျပျေါမှာလဲ Speak out မလုပျလို့ဆို ပွီးးး ပွောသံတှကွေားးနရေတယျ။ နားးးမခံသာလို့. ရေးရခွငျးးဖွဈတယျ။ ဒီလိုဗြ.yonelay နဲ့ပေါငျးးတိုငျးး သူ့လိုမထငျလိုကျနဲ့ဗြ့။ ဇာတျလိုကျက ဇာတျလိုကျ လူဆိုးက လူဆိုးးး။ပျေါပငျလိုကျ တစကျမှအခြိုးးမပွတေဲ့ yonelay နဲ့နှိုငျးးရငျ နှိုငျးးတဲ့သူရိုငျးးမှာပဲ။
ကနြျောတို့ဇာတျလိုကျကွီးးး က တကယျကိုလဲ အပွငျမှာဇာတျလိုကျကြျော ပွညျသူနဲ့တဈသားထညျးးပါ။ အသားးလှတျ ဝဖေနျနသေူတှကေို မွငျ့မွတျ​လသေံနဲ့ပွောလိုကျမယျ.. “ဟြောငျ့ ဂငျြးကောငျမငျးးက ဒိုးးခပဲ”